पारिश्रमिककै कारण बेरोजगार साम्राज्ञी ?
प्रकाशित : सोमबार, मङि्सर १६, २०७६०९:५५
फिल्म । साम्राज्ञी आरएल शाह , डेब्यु फिल्मबाटै स्थापित भइन् । अनमोल केसीको अपोजिटमा कास्ट भएकै कारण र भुवन केसीको डेब्यु निर्देशन भएको हुँदा उनि नोटिस हुनु स्वाभाविक थियो । साथै , फिल्म प्रदर्शन भएसँगै उनले क्यारेक्टरलाई न्याय गरेको चर्चा हुन् थाल्यो । त्यसपछि सहरिया युवायुवती माँझ उनको लोकप्रियता बढ्यो । तर , यसलाई उनले कसरि ह्यान्डल गरिन् भन्ने चर्चा पछिल्लो समय हुन् थालेको छ ।
फिल्म उद्योगमा फिल्म पाउनु ठूलो कुरा होइन । सही फिल्म पाउनु ठूलो कुरा हो । साम्राज्ञीको हकमा यही कुरा लागू हुन्छ । उनले एकसे एक निर्मातासँग काम गरिन् । बजेटको कुनै चिन्ता थिएन । तर, कुनै फिल्मको कथा कमजोर त कुनै फिल्मका निर्देशक । परिणाम, साम्राज्ञीका पछिल्ला सबै फिल्म बक्स अफिसमा असफल भए । अभिनय भन्दा पनि बक्स अफिसकै कारण स्टारडम बढाउदै अगाडी बढेकी साम्राज्ञी अभिनीत तिन फिल्म छाड्ने हो भने , अन्य फिल्मले निर्माताको लगानी जोगाएनन् ।
तर, उद्योगको अनौठो चलन, उता फिल्म फ्लप भइरहने, यता साम्राज्ञीको भाउ बढिरहने ! एक लाखबाट सुरु भएको उनको पारिश्रमिक २० लाख पुग्यो । अहिले अवस्था यस्तो छ कि साम्राज्ञीलाई त्यति मोटो रकम तिर्ने हिम्मत कुनै निर्मातामा छैन । निर्माता पनि के गरुन , किनकी उनीहरु पनि फाईदा नै खोज्छन् । सामाजिक सञ्जालमा उनको लोकप्रिय देखिएपनि बक्स अफिसमा त्यस्तो उपस्थिति नाभायेपछी फलतः आजभोलि उनी बेरोजगार छन् । एकातिर लगातार फ्लप फिल्म, अर्कातिर नचाहिँदो स्क्यान्डल । साम्राज्ञीले फुर्सदमा यसो करिअरतिर पनि फर्केर हेर्ने हो कि ?
पत्रकारले हेरे ‘दाल भात तरकारी’
बालमैत्री उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्दै अनिल
‘लक्का जवान’ सार्वजनिक (भिडियो)
यस्तो बन्यो ‘दाल भात तरकारी’ ट्रेलर (भिडियो)